Imibono yoRhwebo-Funda ukuRhweba
I-EURJPY iNdlela iNqanaba le-131.00, iNqanaba uBuyela kwiNqanaba 131.07
Amanqanaba okuNchasa aPhambili: 132.00, 133.00, 134.00Amanqanaba eNkxaso aPhambili: 129.00, 128.00, 126.00 EUR/JPY Ixabiso Ixesha elide: I-BullishEUR/JPY isibini sirhweba kwindawo ye-bullishEUR/JPY kodwa sinokuhlehla kwinqanaba131.07. Kwintshukumo yokugqibela ye-bullish, ukunyuka kwaphezulu kwaphazamiseka kwinqanaba le-131.00 ukumelana. Oku kubangele ukuba esi sibini siwe phantsi […]
I-NAS100 ikwiDowntrend, imingcipheko iNcipha ngakumbi ngaphantsi kwe-15500
IiNdawo eziPhambili zokuNchasa: i-15000, i-15500, i-16000iNdawo zeNkxaso eziPhambili: 13500, 13000, 12500 NASDAQ 100 (NAS100) Ixesha elide iTrend: I-BearishNAS100 ithengisa ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo kodwa imingcipheko iyancipha ngakumbi kwi-15500 ngo-Januwari 4, i-index. intshukumo ezantsi. I-NAS100 yehle yaya kumgangatho ophantsi we-15000 kodwa yabuyela umva kwinqanaba le-15300. Ngoku, […]
Uqikelelo loNyaka lwe-AUDJPY (2022)
Uqikelelo lonyaka lwe-AUDJPY - Ixabiso limiselwe ukuPhatha iFomathi ye-Downtrend Uqikelelo lonyaka lwe-AUDJPY lubonisa ukuba amaxabiso amiselwe ukukhetha ifomathi ye-downtrend njengoko ukubandakanyeka komthengisi kwiimarike kuqalisa ukuvuselela. Abathengisi okwangoku bamiselwe ukuba bathathe ulawulo njengoko iinkunzi zenkomo zisilele ekusekeni […]
Uqikelelo loNyaka lwe-NZDUSD (2022)
I-NZDUSD Yonyaka ye-Forecast - Ixabiso lisaxhotyiselwe ukungena kwi-Bearish Trend Uqikelelo lonyaka lwe-NZDUSD lubonisa ukuba ixabiso lisaxhotyiswe ngokufanelekileyo ukungena kwi-bearish trend ngonyaka we-2022. Ukuhamba kwexabiso kuye kwabonakala ngokunyuka kunye nokuhla kwisakhiwo semarike. Sabona iinkunzi zeenkomo ziqhina kwaye […]
NgeCawa, nge-16 kaJanuwari 2022
I-Annual Forecast ye-Monero Coin (2022) Kwimeko yezinga lenkxaso ye-$ 179 ibamba, iinkunzi zenkomo zingathatha imarike kwaye ixabiso liya kunyuka ngokubhekiselele kumanqanaba okumelana ne-$ 220, i-$ 249 kunye ne-281 yeedola. Xa iibhere zichitha inqanaba lenkxaso ye-179 yeedola, kunokubakho ukuhla ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-161 yeedola […]
NgoMgqibelo, uJanuwari 15, 2022
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 80.00, i-$ 84.00, i-$ 88.00 Amanqanaba eNkxaso aPhambili: $ 66.00, $ 62.200, $ 58.00 USOIL (WTI) Ixesha elide lexesha elide: I-BullishUSOIL ikwi-uptrend kodwa inokujongana nokukhatywa kwi-$ 85.39. Isalathiso siphinda sivavanye umgangatho wangaphambili we-85.39 yeedola. Kwinyathelo lexabiso langaphambili ngo-Oktobha noNovemba, iinkunzi zeenkomo zahluleka ukuphuka ngaphezu kokuchasana okuphezulu. Ngeli xesha, ngoDisemba […]
I-Polkadot (i-DOT) yenza i-Positive Moves, iNqanaba ekujoliswe kuyo i-$ 30.41
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 60, i-$ 62, i-$ 64 Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 40, i-$ 38, i-$ 36 ye-Polkadot (DOT) Ixabiso lexesha elide eliTrendi: Ixabiso le-BearishPolkadot (DOT) likwinqanaba eliphantsi kodwa lijolise kwinqanaba le-$ 30.41. I-cryptocurrency yenza i-uptrend emfutshane kodwa ibambelele ngaphantsi kwe-$ 28 yendawo yokumelana. Kwiiyure ezingama-48 ezidlulileyo, iinkunzi bezisokola ukophula ngaphezulu kwe-27 yeedola […]
IDOTI / iUSD
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 14, 2022
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide iTrend: I-BullishGold (XAUUSD) ikwindlela ephantsi yokuhamba kodwa inokuhla i-1,800 ye-$. Igolide ibuyisela umva njengoko ijongene nokukhatywa kwindawo ephezulu ye-1,830 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liyaphula inqanaba lokuchasa, imakethi iya kunyuka kwaye iphinde ivavanye kwangaphambili […]
Uqikelelo loNyaka lwe-EURJPY-Ixabiso limiselwe ukukala umphakamo oMtsha ngoKuqulunqwa kweflegi yeBullish Uqikelelo lonyaka lwe-EURJPY lelokuba inyuse imigangatho emitsha, ihambelane nokwakheka kweflegi. Ukubunjwa kweflegi, ihlumelo lepateni engunxantathu, yaqala ukuya esiphelweni somsila ka-2020 njengoko iinkunzi zaqala […]
Yonke into oyifunayo kwiPortal News News
Funda 2 Urhwebo yindawo ekujongwe ukuba ixhobise abarhwebi kunye nabatyali mali ngeenkcukacha kunye neenkcukacha ezifunekayo ukuze ube ngumntu ophumeleleyo kwilizwe lezorhwebo. Namhlanje, wonke umntu ubanga ukuba ngoyena ubalaseleyo, kodwa sikholelwa 'ekunikezeleni.' Sinezinto zonke ezifunekayo ukuze sibe nokuthenjwa (kunye nokuya kwakho) kwindawo yeendaba ye-forex.
Ukuze ube nempumelelo kwicandelo lokurhweba ngemali, umntu kufuneka abe nokuqonda okunzulu kweemarike zezemali kwiindawo ezininzi. Apha ekuFundeni u-2 wezoRhwebo, sineqela leengcali ezinamava okurhweba ngokubhekisele kuzo zonke iimarike ezinkulu zezemali ezinje ngee-cryptocurrensets, izinto zorhwebo, iimali, kunye nee-indices ezijolise ekunikeni abathengisi kunye nabatyali zimali ngolwazi lwezorhwebo ngezinto ezisisiseko nezobuchwephesha.
Zonke izinto ze-Forex, 24/7
Abantu abaninzi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi bagqibe ekubeni bathathe inxaxheba kutyalo-mali kwiimali zangaphandle, konke kubulelwe kurhwebo olumangalisayo nge-intanethi. Enye yezinto eziyimfuneko ekunandiseni impumelelo kule marike ichumayo kukukhetha umrhwebi we-Forex ofanelekileyo kunye nokufumana izandla zakho kwiindaba zeshishini lakutshanje kunye nohlalutyo lwentengiso.
Yilapho i-Learn 2 Trade ingabonakalisa ukuba yi-knight yakho kwizixhobo ezikhanyayo; Funda 2 Urhwebo lubonelela ngeendaba zexesha lokwenyani, izimvo zorhwebo, uhlalutyo lweemarike, iingcebiso zorhwebo, kwaye, okona kubaluleke kakhulu, imiqondiso ye-forex yorhwebo lwe-Forex.
Khumbula, linyathelo elinye kuphela elingalunganga, kwaye uza kukhwela nzima, okanye ungaphelela kwelona xesha libi. Funda ukurhweba 2 kuncede abathengisi abaninzi kwihlabathi liphela ngoku abazuza impumelelo, kwaye sifuna ukuba ube ngomnye wabo. Apha kuFunda u-2 wezoRhwebo, sihambisa ukuthathelwa ingqalelo kwexesha-lokwenyani kwizinto ezinkulu, ii-cryptocurrencies, ngababini bemali, kunye nezalathiso, ukuqhubeka nokunikezela ngezimvo zorhwebo kunye neengcebiso kunye novavanyo olunzulu 24/7.